Pro-HS001 Igwe ọkụ ọkụ / lmpulse ọkụ na-ekpuchi igwe
Max akara 3.2m (10.5 ')
Ịgbado ọkụ onuete 6mm
Oge okirikiri 4 ~ 6 sekọnd
Ike 110V / 50 / 60Hz 15 ~ 18KW
Nsogbu ikuku 6 ~ 9 mmanya （kg / cm2）
Akụrụngwa Akụrụngwa Kemeghi kpo oku okpomọkụ
Kemeghi kpo oku ogologo
Wide nso nke ihe Iji mechie ihe dị iche iche dịka SMS, PP, PE, Polymer, Foil, Tyvek na Nylon, akwa na-enweghị akwa, akwa mkpuchi na-enweghị ihe mkpuchi features Ihe nchekwa dị na ihu na azụ nke otu ， Ejiri ụdị kpo oku dị iche iche. gbalaga dị ka tapered, ewepụghị, curved na na.
Uru nke Presto Impulse okpomọkụ sealer
❒ Mfe izute AAMI Level 3 & 4 chọrọ dị ka ụkpụrụ PB70 si dị consist
❒ Magburu onwe iji na ịkwanyere, Pee, Pu, eyi "thermoplastic akwa ntekwasa, kpara na-abụghị kpara ihe ；
❒ Multilanguage ihuenyo mmetụ HMI ọrụ na Ezi ntụziaka ebe nchekwa ；
❒ Multipoint nkenke P LC okpomọkụ akara (± 3) P LC achịkwa kpo oku na obi jụrụ cycles maka agbanwe agbanwe ịgbado ọkụ ；
❒ Oge dị mkpirikpi oge na 4 ~ 6 sekọnd, arụmọrụ arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya ；
❒ Atụmatụ nchebe dị elu na mgbali mgba ọkụ ；
●Uwe nchedo, tinyere uwe dị iche iche, A na-achịkwa uwe ịwa ahụ site na ụkpụrụ na usoro nyocha nke AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) guzobere. ANSI (American National Standards Institute) / AAMI PB70: 2012 bụ ọkọlọtọ nke na-ewepụta usoro nhazi (ọkwa 1-4) maka uwe nchedo eji arụ ọrụ ahụike dabere na arụmọrụ mgbochi mmiri site na iji usoro ule tozuru etozu.
●Ezubere ụkpụrụ American Association for Development of Medical Instrumentation (AAMI) iji nyere ụlọ ọrụ ngwaọrụ ahụike aka iru ụkpụrụ ụwa maka iji ngwaọrụ ahụike egwu. AAMI onye ọrụ afọ ofufo ahụike ANSI / AAMI PB70: 2012, Nhazi nke arụmọrụ Liquid Performance na Uwe mkpuchi na drapes maka iji na Healthlọ Ọrụ Ahụike, Maka iji ya na ụlọ ọrụ ahụike iji chọpụta usoro njirimara njirimara maka nhọrọ nke uwe nchekwa kwesịrị ekwesị na drapes dị ka uwe elu ahụike ( Ndị ọrụ Pfiedler, 2016). Nkewa nke AAMI dabara na nsonye nke ihe mgbochi anọ, tụọ ya dịka ule ndị a:
● AATCC 42-2017: Jikọtara nguzogide nke akwa na ntinye mmiri (AATCC, 2018).
● AATCC 127-2017: Jikọtara nguzogide akwa ahụ na mmiri ịbanye n'okpuru nrụgide hydrostatic (AATCC, 2017).
● ASTM F1670-17: Nyochaa nkwụsi ike nke ihe eji eji akwa mkpuchi na-abanye na ọbara sịntetik n'okpuru ọnọdụ nke ịkpọtụrụ mmiri mgbe niile (ASTM, 2017).
● ASTM F1671-13: Mmetụta ntinye site na nje ndị na-ebute ọbara site na iji microrog surrogate n'okpuru ọnọdụ na-aga n'ihu na mmiri (ASTM, 2013)
● Ọkọlọtọ ANSI / AAMI PB70: Nkọwapụta nchekwa kacha mma maka afọ 2012 gụnyere ịghọta akụkụ dị egwu nke uwe na ihe ọkwa mgbochi arụmọrụ ọ bụla pụtara, nke mere na ndị uwe ojii na-ahọrọ uwe kacha mma.
●Mpaghara ndị dị oke egwu maka uwe mgbokwasị nwere uwe na uwe aka, ha abụọ bụ mpaghara bụ isi nwere ike ibute mmiri na ọbara na-ebute ọbara. Ọkwa dị elu karị, mkpa ka mkpa maka nchebe ihe mgbochi maka mpaghara niile dị egwu.
● OJU 1: Obere ihe mgbochi mmiri mmiri
● OJO 2: Usoro nchedo mmiri dị ala
● IHE 3: Ọkara mmiri mgbochi mgbochi
● OZI 4: Ọkwa kachasị elu nke mmiri na mgbochi mgbochi mgbochi
AAMI 3 & 4 ule nyocha na Nelson lab
Gịnị mere na ultrasonic ịgbado ọkụ?
● Oghere dị n'etiti mpi na ala dị oke egwu maka arụmọrụ ịgbado ọkụ, maka ọtụtụ n'ime ndị welder ultrasonic enweghị ike ịchịkwa oghere ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi, si otú a enweghị ike ịkwado ụdị ịgbado ọkụ maka ngwaahịa a na-achọsi ike.
● Ngwunye welder ultrasonic fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ntuziaka, usoro usoro oge dị ogologo karịa akara ọkụ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ), ọ ga-enwe ogologo oge mmụta maka ndị ọrụ ahụ.
● Ultrasonic ịgbado ọkụ ga-eme ka obere ntụtụ oghere unperceivable ka gba ọtọ anya nke ga-ada ngwaahịa n'ihi na nje bacteria penetration.
Wide iche nke kpo oku gbalaga
Presto akpaaka bụkwa ihe ngwọta na-eweta ihe nile di iche iche nke ụlọ ọrụ ngwa
Nke gara aga: Pro- 8002 Automatic facemask visual nnyocha igwe
Osote: Akpa / obere akpa akara igwe
Mgbe niile Okpomọkụ Sealer
Okpomọkụ itinye n'ọkwa Sealer
Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ Sealer
Industrial Okpomọkụ Sealer
Obere Okpomọkụ Sealer
Agụụ Okpomọkụ Sealer